Fikarohana sy soradihy: namorona ny « Tsapatsapa » i Juston | NewsMada
Fikarohana sy soradihy: namorona ny « Tsapatsapa » i Juston
Mpanakanto tanora avy any amin’ny faritr’i Sava i Juston. Tany amin’iny avaratry ny Nosy iny rahateo no nahaterahan’ny dihy « tsapatsapa » noforoniny tamin’ny taona 2017. “Tsy nisy fakana tahaka ny “tsapatsapa” fa aingam-panahy nisosa ary niafara tamina fahaterahana kanto vaovao”, hoy i Juston. Karazan-dihy manetsika sy mampiasa ny vatana iray manontolo izy io. “Ankoatra ny fanovozana fahafinaretana eo am-pandihizana ny “tsapatsapa”, azo antoka fa fitaizam-batana feno anisan’ny mahasoa ny zanak’olombelona tsy ankanavaka ity soradihy novokariko ity”, hoy hatrany i Juston. Misandrahaka amina gadona maroloko ny hiran’i Juston fa tsikaritra kokoa ilay fironana any amin’ny mozika tropikaly (zouk love, décalé, salegy…).
Marolafy raha ny talenta ananan’ity mpanakanto ity. Tsongaina amin’ireny ny fananany aingam-pamoronana tononkira notakarina avy amin’ireo trangam-piainana tojo azy na ny mihatra amin’ny mpiara-belona. Eo koa ny fahaiza-manaony amin’ny fandrindrana.
Vina mialoha ny faran’ny taona 2018 ny hamoaka kapila mangirana hahatazanana ny fomba fandihy “tsapatsapa”. Manana ny “JR Prod” (efitrano fandraisam-peo sy fanaovana famerenana ary fikirakirana ny sary) eny Itaosy, rahateo, i Juston.